Jikọọ 2.3 na-abịa na ịkekọrịta faịlụ mpaghara na pịa iwu | Gam akporosis
Jikọọ bụ ọrụ nnyefe faịlụ site n'aka ndị okike nke Tasker na nke ahụ Ya na anyị anọọla afọ anọ. Ugbu a, emelitere ha na mbipute 2.3 ma ọ dị na beta ka ịfefe faịlụ site na njikọ mpaghara nke netwọk anyị WiFi.
N'otu oge ahụ, agbakwunyela akwụkwọ akụkọ ọzọ na-atọ ụtọ nke jikọrọ ndị ahụ Iwu ndị ọkacha mmasị site na menu menu na Windows, iji toomie nọmba ekwentị nke weebụsaịtị ma were ya na ekwentị mkpanaaka ka enwere ike ịkpọ oku ekwentị ozugbo.
1 Ngwa iji nyefee faịlụ site na Tasker
2 Etu esi eji oru ndi ozo abanye ohuru
3 Soro Iwu "Pịa Pịa"
Ngwa iji nyefee faịlụ site na Tasker
Soro bụ ngwa nke ụmụ Tasker bidoro afọ 4 gara aga na nke kachasị na-enye anyị ohere ijikọ ngwaọrụ abụọ ma rụọ usoro omume n'etiti ha dịka ịkekọrịta ọkwa, ozi, clipboard, ọnọdụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ma mgbe esonyere ka ọ nyefee faịlụ n'etiti ngwaọrụ, ọ mere na-ekenye Google Drive ka ọ rụọ ọrụ dị otú ahụ. Ọ dị ka ọ bụ na ha chọrọ imeziwanye ahụmịhe a iji mee ka usoro a dị mfe ma bulie ọsọ mbufe nke ọma.
N'ezie, ọ bụ site na beta ikpeazụ, mbipute 2.3, nke dị na ya na-enye ohere iji njikọ mpaghara ime mbufe ahu. Nke a ga - eji bandwidth kachasị elu ma e jiri ya tụnyere njikọ nwere oke anyị nwere ike ịnwe dabere na anyị nwere fiber optic.
Etu esi eji oru ndi ozo abanye ohuru
Kwesịrị iburu n'uche ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ime nyefe n'etiti ngwaọrụ mkpanaka dị iche iche, naanị anyị ga-etinye ụdị beta nke 2.3 nke Jikọọ, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ mee nke a n’etiti PC na ekwentị mkpanaaka anyị, Ọ bụrụ na anyị chọrọ chrome ndọtị maka ya. Ee, ihe mgbochi ọzọ, mana ha na-enye anyị azịza ya.
N'aka ozo, ewezuga inwe ike jiri njikọ mpaghara nke ha ga-ejikọ ngwaọrụ abụọ a, anyị ga-arụnye sonyere beta, nke mere na ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnyefe, anyị wụnye nke a chrome ndọtị.
Site na gam akporo ngwaọrụ ihe dị mfe dịka jiri òkè menu ma họrọ ngwaọrụ anyị chọrọ iziga faịlụ ahụ; ọ bụrụhaala na anyị ejikọtara na otu Wi-Fi ka ị nwee ike ịchọta ya.
Site na PC anyị, anyị na-ewere faịlụ ma dọrọ ya n'ime Jikọọ. Mgbe njikọ ahụ na-arụ ọrụ ma nyefe na-ewere ọnọdụ, anyị ga-ahụ akara ngosi na-egosi na ihe niile zuru oke a na-emekwa ya.
Ọ dịkwa mma na Sonyere beta anyị nwere ike jiri ntọala ọhụrụ atọ nyere anyị ohere.
Soro Iwu "Pịa Pịa"
Njirimara a nwere ike ịmasị dị ka mkpa gị. Karịsịa maka ọrụ ọkachamara anyị, ebe ọ bụ na anyị ejiri ya nke ọma nwere ike imeghe ọtụtụ ọrụ ịzọpụta ọrụ.
Site na ndọtị Chrome jikọtara na paragraf ole na ole n'elu, anyị nwere atụmatụ oke nri nri nri. Nhọrọ a na-enye anyị ohere ịhọrọ nke bụ iwu ga-akụziri na na windo popup menu mgbe anyị pịa-nri n'akụkụ ọ bụla nke ihe nchọgharị Chrome.
Ọ bụrụ na anyị jiri iwu oku mgbe anyị na-ahọrọ nọmba ekwentị na ihe nchọgharị ahụ, enwere ike ịtọ iwu Oku dị ka ọkacha mmasị ma si otú ahụ pụta na menu menu Windows. Ihe a nwetara bụ na site na PC ị nwere ike ịkpọ oku ozugbo na ekwentị mkpanaaka mgbe ị na-eji ya.
una usoro nke akụkọ na-adọrọ mmasị nke Jikọọ nakwa na ha ga-enye nku ka ha bụrụ ihe ngwọta maka ụdị ndị ọrụ niile. Ọ bụrụ n’inweghị ohere ịnwale ngwa a n’aka ndị okike nke Tasker, echefula oge ahụ ma nye ya oge.
Jikọọ site joaoapps
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Soro ugbu a na-enye gị ohere ịfefe faịlụ na mpaghara ma jiri iwu kachasị amasị na pịa aka nri
Etu esi eji ihe mmado Telegram gi na WhatsApp ma ozo